Amboaram-boninkazo Tea Glass
Kitapo vita amin'ny lakozia
Mpanome solika fitaratra
Qiaoqi Glass dia nandray anjara tamin'ny Fetiben'ny Canton faha-129
Nosokafana ny faha-15 aprily 2021 ny China Import sy Export Fair tamin'ny faha-15 aprily. Qiaoqi Glass, amin'ny maha mpanamboatra zava-boasary fitaratra azy, ny vokatra dia misy solomaso, dite, setran'ny kafe, setran'ny divay, asa-tanana vita amin'ny vera sns. Soa ihany izahay fa iray amin'ireo mpampiranty maro hitondra anao fampiratiana ny vera malaza p ...
Aiza no ahitana mpanamboatra solila?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-01-25
Shijiazhuang Qiaoqi Glass Product Co., Ltd. miorina ao amin'ny Shijiazhuang City, faritanin'i Hebei any Sina. Izahay dia orinasa manondrana matihanina izay manana ozinina manokana, ary manana ekipa matihanina miadidy ny varotra fanondranana. Azontsika atao ny manaiky ny ORON'ANDRIAMANITRA ary mamokatra ho logo sy loko miloko anao ...
Dispenser solika fitaratra - Mpanampy tsara ao an-dakozia
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-10-19
Ahoana no hanamorana ny fiainanao? Ny dispenser menaka fitaratra Borosilicate avo azonay dia afaka manampy anao hifehezana ny fiainam-pahamarinana. Ity tavoahangy ity dia vita tanana. Akora vita amin'ny vera Borosilicate avo. Manoro hevitra!
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-08-20
Fitaovana 1.Choose: fantsom-boasary borosilicate avo hisafidianana ny habe, ny hateviny ary ny savaivony hafa mifototra amin'ny vokatra tokony hamokarana. Ary misy loko mangarahara, amber, manga, mavo, volondavenona, mavokely, mainty, ny col izay be mpampiasa indrindra ...
Aleo misotro rano amin'ny vera borosilicate avo na vera tsotra?
Hatramin'ny nahaterahany, ny teacup vera borosy dia efa nankafizin'ny olona lalina. Izy io dia iray amin'ireo ilaina amin'ny fiainana an-trano, miaraka amin'ny mangarahara avo, fanoherana ny abrasion, ambonin-malama, fanadiovana mora ary fahasalamana. Na izany aza, maro ny fanontaniana napetraka mangingina, "Can high b ...
Inona no atao hoe Glass Borosilicate Avo
Fitaratra borosilicate avo, izy io dia karazana fiakaran'ny vidim-piainana ambany, mahazaka hafanana ambony, tanjaka avo, hamafisana, famindrana hazavana avo ary fitomboan'ny fitaratra manokana momba ny fitomboan'ny simika, raha ampitahaina amin'ny vera mahazatra, ny voka-dratsy tsy misy poizina, ny toetra mekanika, t. ..